I-Sailthru: Lungiselela, Shintsha futhi uhambise | Martech Zone
Lwesibili, Disemba 17, 2013 Lwesibili, Disemba 17, 2013 Douglas Karr
Singena eminyakeni yobudala ethokozisayo uma kukhulunywa ngemininingwane emikhulu nokwenza ngezifiso. Amapulatifomu afana Sailthru Ungenza ngezifiso imvamisa nesihloko semiyalezo oyithumelayo ngeselula noma nge-imeyili - bese wenza okuqukethwe kwesayithi umsebenzisi ahlala kukho kube ngokwakho. Kudala ngibhala ukuthi umkhawulo wesimanje analytics ukuthi iphakamisa imibuzo eminingi kuphela, hhayi izimpendulo zangempela. Amapulatifomu enziwe aba ngewakho afana ne-Sailthru asusa i-paradigm - ethatha idatha ehlaziyayo futhi asebenzise ulwazi lomvakashi ngokunyusa imali engenayo… futhi akwenze ngokuzenzakalela ngokuthumela imiyalezo kanye newebhu.
Ngenkathi lokhu kwenziwa komuntu kukhiqiza umuzwa ophakeme womsebenzisi nokuguqulwa okuphezulu, ngiyafisa ukwazi ukuthi usesho nezenhlalo zizobamba kanjani. Uma nginokuhlangenwe nakho okwenziwe kwaba ngokwakho ... maningi amathuba okuthi iGooglebot ayinayo. Noma uma ngabelana ngolwazi lwami uqobo, uzothola okufanayo? Mhlawumbe, noma mhlawumbe cha. Sizobona… kepha okwamanje, amapulatifomu enziwe aba ngewakho aqhuba ukuzibandakanya okuhle kanye nokuguqulwa. Kubonakala sengathi usuku lwesikhulumi sokumaketha se-imeyili esizimele lungemuva kwethu!
Ngokushayela ukuzibandakanya okujulile, amapulatifomu afana ne- Sailthru kufakazelwe ukuthi kwandise imali engenayo isiyonke. Nakhu ukuthi:
Ukuxhumana okubalulekile nokufike ngesikhathi - Isixazululo seSailthru Smart Strategies sikuvumela ukuthi usethe okuyinkimbinkimbi ukuvuza imikhankaso eyenzelwe ukufaka kabusha abasebenzisi asebekhulile, ukusheshisa ukuthenga okuphindwayo, ukubuyisa ukulahlwa kwenqola, ukunikela ngesilingo samahhala, njll ngezikhathi ezifanele kakhulu.
Okuqukethwe okwenziwe kwaba ngokwakho nezincomo - Ubuchwepheshe benkampani ephethe ubuchwepheshe bukaSailthru, i-imeyili, iselula, ukusebenza okungaxhunyiwe ku-inthanethi nokuziphatha kwezenhlalo ukuthuthukisa iphrofayili yenzalo yekhasimende ngalinye elihlukile. Ukusuka lapho, bangazalisa ngokuzenzakalela konke ukuxhumana kwakho ngokuqukethwe nemikhiqizo efaneleke kakhulu.
Ukudlula kwesigaba sokumaketha okubhekiswe kakhulu - Sebenzisa i-Sailthru ukwakha amaqembu womsebenzisi ashukumisayo, anolwazi olunzulu ngokususelwa kudatha eningi yokuziphatha etholakalayo yekhasimende ngalinye.
Ukuphathwa kwemali engenayo enembile futhi esebenzayo - Amamethrikhi ajwayelekile eSailthru kanye namamethrikhi wokubuka ikhasi anika amandla abathengisi kanye namaqembu wokuhlela / we-curation ukuze enze imikhankaso yabo yokumaketha nokukhushulwa kususelwe kumadola wangempela kunokuvula noma ukuchofoza nje.
Tags: i-automateKhululaukwandisa imaliukuthuthukisanokwandisaukuzenzelauseyili